Al-shabaab oo markii u horraysay si rasmiya uga hadashay Ridistii Ra'iisul wasaare Khayre – Puntland Post
Posted on July 31, 2020 July 31, 2020 by CCC
Al-shabaab oo markii u horraysay si rasmiya uga hadashay Ridistii Ra’iisul wasaare Khayre
Ururka Al-shabaab, ayaa markii u horraysay si rasmiya uga hadlay, Xilka qaadistii Aqalka Hoose ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya ay ku sameeyeen Ex. Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre iyo xaaladda Siyaasadeed ee ka jirta Magaalada Muqdisho.
Af-hayeenka Al-shabaab Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), oo xalay jeediyay hadal ku aaddan Munaasabadda Ciidda, ayaa sheegay in Ridistii Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre ay muujisay wejiga dhabta ah ee hogaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, Dowladda Madaxweyne Farmaajo ayuu ku tusaaleeyay in ay lamid tahay buul-caaro, oo si fudud ku dumaya, isagoo xusay in ay hadda cagta saartay wadadii burburka, kadib Ridistii Ra’iisul wasaare Khayre.
Dhinaca kale, Cali Dheere wuxuu ka hadlay duqeyn diyaaradaha Maraykanku ay laba maalmood ka hor ka fuliyeen Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Hoose, waxaana uu sheegay in duqeyntaas lagu dilay saddex carruur ah oo keliya, balse aysan jirin xubno ka tirsan Al-shabaab oo ku dhintay.